Women's health care | ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်သတင်းအချက်အလက် | USAHello
ဒုက္ခသည်နှင့်လူဝင်မှုအမျိုးသမီးတွေကသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေအကြောင်းသင်ယူနှင့်၎င်းတို့၏ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ရန်အဘို့အဒါဟာအရေးကြီးပါတယ်. ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူအမျိုးသမီး၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးလေ့လာပါ. အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များကိုအဘယ်မှာစောင့်ရှောက်မှုရဖို့ရှာမည်.
အဘယ်ကြောင့်အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုယေဘုယျကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသည်? အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ကျန်းမာရေးအတော်များများကသူ့မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနှင့်ဘဝ၏အဆင့်ဆင့်ချိတ်ဆက်. (မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး သင့်ရဲ့ကာလကိုဆိုလိုသည်, ကလေးငယ်ရှိခြင်း, နှင့်သွေးဆုံးမှတဆင့်မယ်။)
ရာသီသင့်ရဲ့ကာလကဲ့သို့တူညီသောအရာဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာမျိုးဆက်ပွားနေအရွယ်အမျိုးသမီးကြုံတွေ့လစဉ်အင်္ဂါဇာတ်သွေးထွက်ဖြစ်ပါသည် (အသက်အရွယ်နှင့် ပတ်သက်. 12 သို့ 55). ရာသီအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုယ်ဝန်ရှိမဟုတ်ကြောင်းပြသ. သင့်ရဲ့ကာလနှင့်ကာလအကြားကြိမ်သည်သင်၏ဟုခေါ်ကြသည် “ရာသီစက်ဝန်း။”
သုံးခုနစ်ခုမှလက်ထက် မှစ. နောက်ဆုံးကာလ. လိင်အင်္ဂါကနေသွေးထွက်အပြင်, သငျသညျရှိစေခြင်းငှါ:
Premenstrual syndrome ရောဂါ, သို့မဟုတ် PMS, ကာလမတိုင်မီစတင်လက္ခဏာတွေအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေပါဝင်နိုင်ပါသည်.
သင်သည်သင်၏သံသရာအတွက်ကြီးမားသောအပြောင်းအလဲများရှိပါကသင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူတိုင်ပင်ဆွေးနွေး. သူတို့ကကုသသင့်ကြောင်းအခြားပြဿနာများလက္ခဏာဖြစ်နိုင်သည်. ရာသီအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ.
ကိုယ်ဝန်ဆောင်သောမိန်းမမှန်မှန်သူမ၏ကျန်းမာရေးနှင့်သူမ၏ကလေးများ၏ကျန်းမာရေးကိုသေချာစေရန်သူမ၏ဆရာဝန်သွားရောက်အရေးကြီးသည်က. သငျသညျကိုယျဝနျဆောငျရောက်နေတယ်ဆိုရင်, အခါအဘယ်မှာသင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စောင့်ရှောက်မှုရရှိနိုငျသငျသညျအကွောငျးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန်မှဟောပြောသောသေချာအောင်.
MedlinePlus ရှာနေစတင်ရန်ကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်ပါသည် ကိုယ်ဝန်အကြောင်းကိုယေဘုယျကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်. အဆိုပါအကျဉ်းချုပ် Read. ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးအပေါ်သတင်းအချက်အလက်ရန်သင့်အားယူ Thenchoose လင့်များ, ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှဖြစ်ပျက်မှလုံခြုံစိတ်ချစွာလေ့ကျင့်ခန်းကိုဘယ်လိုကနေ.
သငျသညျကိုယျဝနျဆောငျရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သင်၏ကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ဖို့အထူးအရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, သငျသညျအစာစားသောက်ခြင်းအဘယ်အရာနှင့်အတူသတိထားဖြစ်ခြင်းနှင့်သင်မည်သို့လေ့ကျင့်ခန်းအပါအဝင်. သငျသညျကျန်းမာနေဖို့ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းသင့်ရှိစေခြင်းငှါမဆိုမေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် ပတ်သက်. သင်၏ဆရာဝန်နှင့်အတူစကားပြောဖို့သေချာအောင်လုပ်ပါ. ကိုယ်ဝန်စဉ်အတွင်းသင်၏ကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ.
ကနျြးမာရေးပြန်ကြားရေးဘာသာပြန်ချက်များကိုထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ website တစ်ခုဖြစ်ပါသည် ကိုယ်ဝန်နှင့်ကလေးမွေးဖွားရန်နှင့်ဆက်စပ်သောသတင်းအချက်အလက်. သငျသညျအကွောငျးကိုလေ့လာသင်ယူလိုသောခေါင်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ပါ. ထိုအခါ, လာမယ့်စာမျက်နှာပေါ်တွင်, သင်၏ဘာသာစကားကိုရွေးချယ်ပါ.
တွင် ကလေးမွေးဖွားကော်နက်ရှင်, သငျသညျအမြိုးသမီးတရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သူမကကလေးမွေးဖွားပေးစဉ်မှတဆင့်တတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်. သငျသညျအလုပျသမားကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါပြဿနာများ၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုအကြောင်းကိုဖတ်နိုင်နှငျ့သငျဆေးရုံမှာလက်ခံရရှိရန်မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်စောင့်ရှောက်မှု၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကို. သင်မွေးဖွားပေးခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှအတွေ့အကြုံရှိသည်နိုင်အောင်ရှေ့ဆက်စီစဉ်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းကိုဖတ်ရှုနိုင်သည်.
ကောင်းစွာ အလုပ်သမား၏လက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများအကြောင်းကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များအဘို့အအသုံးဝင်သောအချက်အလက်များ၏တွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ်. လည်း, သင်တစ်ဦးဆေးရုံတွင်ကလေးမွေးဖွားပေးလျှင်သင်တွေ့ကြုံခံစားစေခြင်းငှါ, အဘယ်သို့သောအကြောင်းဖတ်နိုင်.
သငျသညျယောက်ျားကိုဘွားမြင်ပြီပြီးနောက်, ဒါကြောင့်မိခင်နှင့်ကလေးနှစ်ဦးစလုံးအတှကျကနျြးမာရေးအကြိုးကြေးဇူးမြားအများကြီးရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နို့တိုက်သင့်ရဲ့မွေးကင်းစကလေးအစာကျွေးမယ့်ကြီးမြတ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. ကျွမ်းကျင်သူများကဖြစ်နိုင်လျှင်သည်ဟုဆို, ကလေးငယ်မှာအနည်းဆုံးပထမဦးဆုံးအဘို့အ breastfed ရပါမည် 12 သူတို့ဘဝလ.
တစ်ဦးကောင်းကိုဖတ်ပါ နို့တိုက်အခြေခံခြုံငုံသုံးသပ်ချက်, မှန်ကန်စွာနို့တိုက်ကျွေးရန်မည်သို့မည်ပုံအကြောင်းကိုလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်နို့တိုက်ကျွေးဖို့ကြိုးစားနေစဉ်အများအပြားမိခင်များရင်ဆိုင်ရကြောင်းဘုံပြဿနာများတစ်ခုတူးဖော်ရေးအပါအဝင်.
la Lech လိဂ် ကမ္ဘာတဝှမ်းအမျိုးသမီးတွေအောင်မြင်စွာနို့တိုက်ကျွေးကူညီပေးသည်ကြောင်းနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်. သင့်ရဲ့ဧရိယာထဲမှာတစ်ဦး, La Lech လိဂ်တိုင်ပင်ရှာပါ.
သင်သည်သင်၏ကလေးနို့တိုက်ကျွေးစဉ်ကျန်းမာလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မှသိမ်းဆည်းထားပါ, သငျသညျအတှငျးရှိတတ်ကြောင်းအရာအားလုံးကိုသင့်ကလေးသွားနေသောကြောင့်, လွန်း. ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနို့တိုက်အပေါ်သက်ရောက်မှုကိုဘယ်လိုလေ့လာပါ.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌, ဟုခေါ်သော program ကို အမြိုးသမီးမြား, မွေးကင်းစနှင့်ကလေး (WIC) ဝင်ငွေနည်းကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေကူညီပေးသည်, အသစ်သောမိခင်များနှင့်သူတို့၏နုပျိုကလေးများ (ရန်အထိ5အသက်အနှစ်) ကျန်းမာနေဖို့. အဆိုပါ WIC Programs ကိုန်ဆောင်မှုများ၏နံပါတ်ကမ်းလှမ်း, နို့တိုက်နှင့်အတူအကူအညီအပါအဝင်, အာဟာရအတန်း, နှင့်ကူပွန်အချို့အတည်ပြုအာဟာရအစားအစာများကိုဝယ်ခြင်းငှါ.
သင်လုပ်နိုင်သည် သင့်ရဲ့ပြည်နယ် WIC ရှာတွေ့. သင့်ရဲ့ပြည်နယ်အတွင်းရှိ WIC အေဂျင်စီများအတွက်စာရင်းတယ်လီဖုန်းနံပါတ်ခေါ်ဆိုပါ. သငျသညျ WIC သက်သာခွင့်များအတွက်လျှောက်ထားရန်ရက်ချိန်းချင်သောသူတို့ကိုပြောပြပါ.
သွေးဆုံးသူမ menstruating နှင့်မဟုတ်တော့ကလေးများရှိသည်ဖို့တတ်နိုင်ရပ်သည့်အခါအမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့အသက်တာ၌ကာလဖြစ်ပါသည်. အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်သူမ၏အစောပိုင်း 50s အတွက်အခါသွေးဆုံးမကြာခဏဖြစ်ပေါ်, သို့သော်အချို့အမျိုးသမီးများ, ကအစောပိုင်းကဖွစျနိုငျ.
များစွာသောမိန်းမသွေးဆုံးနေစဉ်အတွင်းအပျက်သဘောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေအချို့ပေါင်းစပ်တွေ့ကြုံခံစား. တစ်ဦးကဆရာဝန်များသောအားဖြင့်ကဤရောဂါလက္ခဏာတွေပြုမူဆက်ဆံကူညီပေးနိုင်ပါသည်. သွေးဆုံးအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ.
တချို့ကဆေးဝါးကုသမှုအခြေအနေများယောက်ျားထက်အမျိုးသမီးတွေပိုမိုဘုံများမှာ. အမြားအပွားကိစ္စများတွင်, ထိုအမြိုးသမီးမြားရဲ့မျိုးဆက်ပွားအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းကိုထိခိုက်ကြောင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများများမှာ (ထိုကဲ့သို့သောရင်သားကင်ဆာသို့မဟုတ်သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာအဖြစ်). ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့များ, ကိုယျ့ကိုယျကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းထောက်ပံ့, အမျိုးသမီးအလောင်းနှင့်ဘုံအမျိုးသမီးကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိပ္ပံနည်းကျတိကျမှုသတင်းအချက်အလက်များ.
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာစိစစ် (ထို့အပြင် PAP စမ်းသပ်မှုအဖြစ်လူသိများ)
HIV ပိုးနှင့်အခြား STD စမ်းသပ်
အမျိုးသမီးလိင်အင်္ဂါဖြတ်တောက်ခြင်း (FGC) အချို့နိုင်ငံများတွင်အတွက်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်. ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာအဖြစ် FGC အကြောင်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရသူကိုလူအတော်များများရှိပါတယ်နေစဉ်, USA တွင် FGC ဖျော်ဖြေဖို့တရားမဝင်ထိုသို့. ယင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ FGC ၏ကျန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုများ.